Fahatsiarovana ny Tiananmen ao Hong Kong: Hetsi-pifandanana miha-mampididoza · Global Voices teny Malagasy
Fahatsiarovana ny Tiananmen ao Hong Kong: Hetsi-pifandanana miha-mampididoza
Polisy 7000 no naely hanakana ny famorivoriana olona hiara-mahatsiaro ny fotoana
Voadika ny 06 Jona 2021 4:27 GMT
Hongkonger iray manao t-shirt momba ny 4 jona 2021. Hoy ny fivakin'ny teny: Tsy hanadino ny vahoaka. Saripikan'i Oiwan Lam
Nanely polisy miisa 7000 tao Victoria Park sy manerana ny tanàna ny polisin'i Hong Kong hiantohana fa tsy misy ny fanomanana fiaraha-mahatsiaro ny famonoana tao amin'ny kianjan'i Tiananmen taona 1989 eny ankalamanjana.
Hanaparitaka polisy miisa 7000 ao amin'ny Victoria Park sy manerana ny tanàna ny polisin'i Hong Kong amin'ny 4 jona hanakana ny HKers tsy hanao fiaraha-mahatsiaro ny famonoana an-kianjan'i Tiananmen 1989. Mety hosamborina izay olona manao akanjo mainty na mihazona labozia.
Tamin'ny 7:40 maraina, polisy efatra no nisambotra ny mpikatroky ny demaokrasia Chow Hang-tung ivelan'ny toeram-piasany hisorohana ny tsy handehanany ho any Victoria Park. Tsy mbola nisy ny tatitra manondro fa efa navotsotra izy.
Efa telopolo taona izao i Hong Kong no nijoro nandrehitra labozia ho fiaraha-mahatsiaro ny famonoana olona maro tao amin'ny Kianjan'i Tiananmen tamin'ny taona 1989.
Sambany tamin'ny taona 2020 ny polisin'i Hong Kong police nandrara ny hetsika, nanonona ny fepetra iadiana amin'ny coronavirus. Victoria Park no zaridaina hanatontosana ny fijoroana.
Ny helony? Nijoro ho amin'ny rariny.
Chow no filoha-lefitry ny Hong Kong Alliance ho fanohanana ny hetsika tia tanindrazana demaokratika ao ao Shina (HK Alliance), ny vondrona izay nanatontosa ny fijoroana isa-taona.
Niteny tamin'ny gazety izy fa handeha an-tsitrapo ho ao Victoria Park ary handrehitra labozia amin'ny 4 jona, na dia eo aza ny rahona mety higadra noho ny “fandrisihana hanao fivoriana tsy ara-dalàna”.
Miady ny mpahay lalàna sady mpikatroka Chow Hang Tung mba hahavelona ao Hong Kong ny fahatsiarovana ny famoretana tao Tiananmen tamin'ny taona 1989, na dia mety hiatrehana fanagadrana aza izany noho ny fahatsiarovana ampahibemaso ny toe-java-nisy.
Farafahakeliny mpikatroka pro-demaokrasia miisa 24 no voampanga ho nandray anjara tamin'ny fijoroana tsy nahazoana alalana tamin'ny herintaona, ka ny efatra tamin'izy ireo nodidiana higadra hatramin'ny folo volana.
Miandry fitsarana sy ny didy ny hafa.
Nampitandrina ny Sekretera Misahana ny Filaminana ao Hong Kong, John Lee, tamin'ny alalan'ny Hitsivolana Filaminam-bahoaka (Public Order Ordinance), fa mety hiatrika famonjàna hatramin'ny dimy taona [mg] izay manitsakitsaka ny lalàna amin'ny alalan'ny fanatrehana fijoroana, na hatramin'ny herintaona amin'ny fampiroboroboana azy.
Rehefa voarara ny fijoroana, nampirisihan'ny mpanolotsaina ara-politikan'i Beijing momba ny raharaha Hong Kong, Tian Feilong, ny sampan-draharaham-pilaminana Hong Kong hanao famotorana ny HK Alliance noho ny fanitsakitsahany ilay lalànan'ny fiarovam-pirenena malaza ratsy izay natsindrin'i Beijing an'i Hong Kong tamin'ny herintaona.
Nandresy lahatra izy fa manitsakitsaka ny lalàna ny fanambaràna ho iraky ny fikambanana izay miantso ny hamaranana ny jadon'antoko tokana, satria voasoratra ao anatin'ny lalampanorenana shinoa ny jadon'Antoko Komonista Shinoa.
Tamin'ny 3 jona, nampitandrina ny mpikambana ao amin'ny Vaomiera Mpanatanteraka Ronny Tong fa mety ho azo tsaraina ho manitsakitsaka io lalàna io na ny lalànan'ny fanaovana fivoriana tsy nahazoana alalana ny olona manao akanjo mainty sy mihiaka toy ny hoe “farano ny jadon'antoko tokana”.
Tsy hafa amin'izany raha mipoitra amin'ny faritra maro ao an-tanàna ny mpanao fihetsiketsehana, raha vao azo jerena ho voarindra ny hetsika ataon-dry zareo, hoy i Tong.
Nilaza anefa izy fa tsy voarara ny fahatsiarovana ataon'olona tsirairay ny tsingerintaona.
Toerana azo antoka lasibatra, nakatona
Koa satria nahetsika manerana ny tanàna ny polisy hisorohana amin'izay mety hisian'ny fihetsiketsehana, dia tohintohinin'ny mpampihatra lalàna sy ireo vondrona pro-Beijing ny vahoaka mba tsy hiatrehan'izy ireo izay mety ho fihetsika fiaraha-mahatsiaro, eny fa na dia any amin'ny toerana tsy an'ny fanjakana aza.
Fiangonana katolika fito izay nikasa ny hanatontosa lamesa takarivan'ny 4 jona no nifantohan'ny fanafihana:
Koa satria manome sehatra azo antoka ho an'ny vahoaka ny fiangonana hahatsiarovana ny 4 jona, dia nitsangana ivelan'ny tokotanin-dry zareo ny sora-baventy: “Fivavahana fanafihan'ny finoana. Antikristy, mesia sandoka. Korontana amin'ny anaran'ny fivavahana. Fivavahana mpampisara-bazana, mihoson-dra ny tanan-dry zareo. Mitandrema amin'ny fanitsakitsahana ny NSL [lalànan'ny fiarovam-pirenena] ry mpandeha am-piangonana.”
Tamin'ny 2 jona, nanambara ny HK Alliance fa nakatona ny Mozea 4 jona rehefa niampanga azy ny manampahefana avy amin'ny departemantan'ny Sakafo sy ny Fahadiovana ara-tontolo iainana fa miasa ho toeram-pialamboly ny vahoaka tsy nahazo lisansa izy io.
Mikatona vonjimaika amin'ny resaka fahazoan-dalana ny Mozean'ny 4 jona ao Hong Kong. Folo taona lasa izay no nisokatra ny tahala. Natao izy io ho fiaraha-mahatsiaro ireo niharam-boinan'ny famoretan'ny polisy tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana manohana ny demaokrasia tao amin'ny Kianjan'i Tiananmen.
Na dia eo aza ny fandrahonana ara-pitsarana maro, mahita lalana ny olona ho enti-mahatsiaro ny tsingerintaona ampahibemaso.
Ny 3 jona, nisy tarika artista nanatontosa zavakanto ankalamanjana tao amin'i Causeway Bay:
Hong Kong – vondrona artista manao fihetsika ho fahatsiarovana ny 4 jona ao Causeway Bay, ny alina mialoha ny fijoroana voarara.
Maromaro ireo olona no nankao amin'ny Victoria Park hanatontosa “fijoroana samy irery”:
Famonoan'olona maro kianja Tienanmen: olona vitsy mivory ao amin'ny Victoria park hahatsiaro ny vono olona maro tao Tiananmen tamin'ny 4 jona.
Hita any amin'ny distrika isankarazany manerana ny tanàna ny afisy 4 jona maro dia maro.
Maro ireo olompirenena no manao akanjo mitondra hafatra politika. Nilaza ry zareo tao amin'ny media sosialy fa mikasa ry zareo handrehitra labozia amin'ny valo ora alina,tsy ijerena hoe aiza ao an-tanàna ry zareo amin'izany.
Sary avy amin'ny Stand News. Nahazoana alalana.
18 ora izayShina